MUUQAAL: Dhoolatuskii R/wasaare Khayre ka sameeyay Waqooyiga Gaalkacyo ee Puntland aysan ku Farxin | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Dhoolatuskii R/wasaare Khayre ka sameeyay Waqooyiga Gaalkacyo ee Puntland aysan ku Farxin
Jul 11, 2019 - 22 Aragtiyood
Gaalkacyo ( Kalshaale ) Raysal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maalintii Shalay Kumanaan kamid ah shacabka Waqooyiga magaalada Gaalkacyo Kula hadlay Goob Fagaare ah, Iyadoona Arintaas ay siwayn uga Xumaadeen Xubno ka tirsan maamulka Puntland oo doonayey in la kala Qariyo Shacabka iyo Khayre.
Raysal wasaare Khayre ayaa sheegay in Shacabku ay Dawlad u baahan yihiin, Dawladduna ay shacabkeeda u baahan tahay “Lama Kala Qaadi karo Shacabka Dawaldda, Waa Beerkii iyo Wadnihii, Dawlad aan shacab lahayn Dawlad maaha, Shacab aan Dawlad lahayn Shacab maaha “ Ayuu yidhi Khayre.
Khayre ayaa sheegay inuu Halkaasi u yimid inuu la Wadaago sida Qalbigiisu Raali uga yahay, Gaalkacyo oo Midowda, oo Horumar gaadha.
“Waxaan idiinku imid inaan idinla wadaago Qalbigayga Sidaan Raali idiinka ahay, Gaalkacyo oo Hagaagtay waa Soomaaliya oo Hagaagtay, Xalka Gaalkacyo oo Midaysan waa midkii Midayn lahaa Soomaaliya, waaa inaad Soomaaliya Tusaalle uga dhigtaan” Ayuu yidhi Khayre
Khayre ayaa Ballan Qaaday in Dawladda Soomaaliya ay dhisi doonto Garoonka Kubadda Cagta ee Cawaalle , Taasi oo dhalinyaradu ay Baahi wayn u qabeen.
Markaan ogaadey inuu Kheyre yahey Dictator yar hadda maaheyn, Dictatornimo, Aftahannimo, iyo Geesinimo= Leadership
War ninka naga qabta intuusan nagu xoogeysan.
-Xaaf oo ah Barasaabka Mudug iyo Galgaduud ayuu Xamar u xawiley, waaba DALXAHEENA BARI Mr Deni oo Ice-cream boorsada ku wato, yuusan ku tarxiilin Kheyre Boowe.
* Kheyre ku arag, Farmaajana kuu aamus waa Habaarka sanadkaan.
War dee qaranku kama Maarmo Beesha Majeerteen, ninkii Calanka Somaliya sameeeyey iyo ninka ku saxeexan Lacagteena Shiling somaliga ah Maxamed maxamuud soo Majeerteen ma aha .
Idoor liqe, labada nin midbaa SHIIKHAAL ahaa. WBT
Xataa uma jeedo CALALKII DOWLADDA DALKA PUNTLAND miyaa la mamnuucey, waxaan u maleyn inuu soo dhamaanhayo Cancerkii Meles Talaaley aka Federaal Gaaweeto.
* Galkacyo waa bilowgii Federaalka ama dhamaadkii Federaal (Dr Baadiyow).
Khayre cunug yar iska ordaya noqday oo ciyaal xamaasadaysan isku sawiraya..
Meeday geedi soconkii nabadda, la rabay in maamulka la hadlo iyo meesha la joogo sidii hore looga socon lahaa, isku soo jiidka ummadda iyo xallinta qilaaf wixii ka harsan gobolka Mudug iyo dowladnimada Somalia.
Wuxuu abuuray tension loo baahnayn.
Waxaan sugeynay in Galmudug maamul u dhan yihiin dhiso, hadda Puntland sii fogeeyey.
Waa ciyaala suuq mooda in caruurtaan talo ka go’do.
Daanyeer, inta kuu hartay meelahaaga boodbood, kollay lacagaysataye, waana markii kuugu dambaysay oo Puntland lagaa soo dhaweeyo.
Car Baraxley isoo dhaaf.
LOP, saaxiib yaan lagaa tegin. °Khayre wuxuu yiri; “Anigu odayo Qabyaalad dilatay oo macaan jecel ah la hadlimaayo ee UBAXA ayyaan la xiran. °Adeer ma aragtay mid u hadlay Puntland af-xumada uu kula hadlay Wasiirki Koowaad ee Dawladdi ummadda Somali? Ma taas baad raalli ka tahay?. Waxaan maqli jiray; “Habadnimada qaarkeed aday kuu had noqota”: °Adeer kool koolinti Puntland waxay dhashay inay Dawlad gooniya is Moodo oo ay Madaxdi Dawladda kula hadasho luuqad aan munaasib ahayn. °Aaway; “nin rag ah baa Amaal-Abaal loo gala oo lagu ogaada”. °Puntland Puntland Puntland dhammaatay Waxaan gaarnay ilaa uu DENI ka maago inuu Xamar tago. °Adeer halla yaabin haddaad aragto Anigoo SI XAD DHAAFA uga soo horjeeda Shir Somali oo lagu qabto Garawe SAA waa aragnay waxay kool-koolinti nabade. °°°°°Qaar baa mooday inaan mar dambe Dawlad Somali la heli doonin! HADDABA ma waalanyihiin Dawladaha ay Safiiradoodi XAMAR ku soo qulqulayaan?. WBT
Anigu Khayre & ina dhabancadba si shakhsiya ayaan labadaba u aqaan reer oslo ayaanu wada nahay.Khayre oo maqaaxi haysta ayaan ogaa mudo ka bacdina PM isgoo ah ayaan arkay yaab kkkkkkkkkkkkkkkkk
Lop iyo xaange mxd laqeylineysan kheyre hadeey isfahmeen cayr iyo cumar maxamuud inta kale waa canbullo carabsaaran kkkkjjj
Dhaliyrata Somaliyeed xanuunbaa lagu beeray.Waxaa muuqda inay ka daaleen beentii iyo wixii lagu soo waday ilaa markii ay dhasheen.
Dhalinta Somaliyeed waxaa u fiican inay wadanka qabsadaan sidii kuwii Japanka iyo China.
Waa inay ciidanka galaan oo wdanka ka xoraystaan Alshabaab iyo kaba qaadkii shisheeyaha.
Khayre wuxuu leeyahay calaamadaha Hogaamiyaha. waxaad moodaa inuu ku hadlayo hadalo milgole oo ay dadku dhigaha u furaan.
Kuwa kala qaybiyay hal magaalo,dhalinyarta Somaliyeed rajo kama sugayaan.
Maya,dhalinyartu aqli ayay leeyihiin.
Waxba uma soo wado nin fawdo ku lacagaystay oo meel calan yar ka taagtay oo kolba Gaal u baryo ku soo dhawyaa Tuladiisa.
Wafti ayaa ii joogaa kkkk
Dhalinyratu shaqo iyo nolol ayay rabaan.Aqoon ayay rabaan oo mustaqbal ayay hiigsanayaan.
Oday mustaqblkii ku soo madoowyahay inay dhegaystaan waa qalad.
Kawar hee, miyaad u jeeda HAL QOF OO REER QURAC AH, oo leh DENI waa qaldan yahey.
ilaa reer Muqdisho bartaan aqliga ka shaqeeyo Quraca hoostiisa, sidaas ayaa loogu soo gashan JACKET GUNO DOON AH ( Sorry Qaran doon ah )
– xildhibaan Zakariya iyo Max’ed Cabdi Yuusuf miyaad aragtey. Waa raggii Qalbi-Dhagax Ethiopia u geeyay.
Landof Punt says:
Sxb dhibka jiraba waa in Cumar Maxamud iyo Cayr midna wadan maanta Khayre.
Wadaadadii suufiyada reer adeerkaa weli ma qanacsana, Saleeban iska ilow waaba xanaaqsan yihiin, Sacadna indha taag ku jiraan iyo muxuu Khayre soo wadaa.. oday Xaaf xow ku sameeyey.
Mareexaan iyo Dir in shaah loo ogol yahay ma aaminsana…kkkkk
Cumar Maxamud, Leelkase, Reer Bicidyahan Galkacyo ku daaye, ganjeelihi Puntland xirteen.
Canbuulo carrab saaran inta kale, lama joogo.
Cambuulo karsamaysaba mala hayo.
Khayre digsigii ku kaadiyey.🤓
Weli si fiican ma rajo dhigin….aniga.
Imaam dabshid salaan sare.
Reer qurac miyaad weli rejo ka leedahay. In ay isku cadeyaan.
Ku baro ururkii kablalax ee Mr gaas hogaaminaayay.
Imisaan lahaa sida reer qurac hadii loo xisaabsato ama waa lakala tagilahaa ama waa la heshiin lahaa.
Shaqo ayaan ku jiraa war badan kama gaaro.
Waar wax badan ayaa laga soo gudbay e la socda.
Faroole oo odhan jiray Ruuga cas ee loo dhigay shariif axmed anna aan maro.
Wafti kasta oo u baxa dibada waa inuu ku jiraa dad Puntland ka socda.
Melez iyo Adis loo dacwo tago.
Wax la yidhaa Beesha Caalamka oo loo dacwo tago.
Xidhiidhka oo loo jaro Muqdisho.
Xildhibaanada Garoowe ka soo jeeda oo lo yeedho.
Maamul fawdada Somaliyeed oo la shiriyo.
Go’aano lagu dhawaaqo iyo Ururka maamul fawdada oo midooba.
Waxaasi way soo gudheen.
Mr Deni wuxuu haystaa digniin.
Taasi oo ah :
A)in aanu iskugu yeedhikarin wax la yidhaa maamul goboleed kkk
B) In uu ku ekaado meesha uu maamulo ee la yidhaa Puntland.
C)In isagu wixii uu rabo kala hadlo dawlada
Nacnac dambe iyo midiow la yidhaa maamul goboleed wuu soo gudhay.
Adeer Beeshii Caalamka ayaa ka daashay quudinta Somalida.
Stawuu ayaa ka dhacday.
Anigu Ahlu Sunna ahay, old Somali dariiqa.. peaceful.
aanu isku imaan jirnay xiliyada sida mawlidu nabi..calayhi salaam, ciidul fitri, ciidul adxa.. etc.
Ku dikriyi jirey: Inta raacday nabiga, rafiiqooda noqday oo rumaysay islamka naga yeel. Amiin.
Khawaariij, Wahabists iyo bloody Salafisteyaal, wax kuma darsado.. Calankeeni tuuray oo mid madow xirtay oo dadkii hasteen dhurwaa u qalay..
They are indeed foreign created enemy and bloody killers.
Adeer fikirkaaga xorbaad u tahay, waxa aad rabto in ka hadasho miiska soo dhig adiga oo cidna u joojin.. Karbaash la dhac cidda fikirkooda diidan tahay ama siyaasadooda…. This is free forum.
Aan suaal ku weydiiyee, Beledweyne weegaan gudoomiyihii parleman Hirshabeele ayaa joogay.. Dabageed malasoo qabtay, Hirshabeele carro ma nabadbaa! Ganacsiga Puntland iyo Hiiraan waa isku xurnaayeen.. nabad u rajayn.
LOP, Saaxib inteed ila aaday? saaxiib reer Hiiraan waan u dhashay LAAKIIN hawlahooda kama warqabo oo HADDA waxaan ku jiraa dhufeys ku yaal Buhoodle oo aan ku hortaaganahay hororka ISAAQ & MAJEERTEEN. °Adeer ima garakartide waxaan ahay Xaq u dirir HADBA Cidda laga gardaranyahay la safta. °Adeer si aan caadi ahayn baan u fikiraaye BAL ii sheeg cid aan Sheegto HADDUU igu Jiro dhiig; Xawaadle, Mareexaan, Ogaadeen, Shiikhaal iyo qaar kale, haddana MAASHÀ-ALLAAHUYE ay caruurteyduna ay ii keeneen; Awrtable, Dhulbahante, Isaaq, Majeerteen, Sacad iyo iyo iyo? marka sow qasab iguma aha inaan iraah Qabiilkaygu waa Somali. °Rooble. VIVA maryooley. WBT
Walaahi Somali run ayaa tahay…
Aniga waa kaa masayray, aniga hal Habar cad ag fadhiyaa…kkkkkkk kaftan.
Laakiin waa jeclahay way ii roon tahay, in naag kale ila qaybsato waan ogahay meesha ka joogto..
Buulkayga isaga jirin…..
War ninyahow libaax baa tahay…kkkkkkk
Dhulbahante dhulkoodii bay joogaan, bal orod Cali Khaliif Hargeysa kasoo kaxee!
Laf cad baad toobin ku haysaa.
LOP adeer, Dhulbahante waxaa dayriyay Xasan Sheekh MARKAASU Cali Khaliif u soo jeestay inuu mideeyo reer Waqooyi DABADEEDNA loo xisaabtamo Reer Waqooyi & reer Koofur. °Cali waa ogyahay inuu iska dhammaan xiisaha ka dhex jira Isaaq & Dhulbahante MARKA hammigiisu waa meel sare iyo Reer Waqooyi & Reer Koofur oo is hor fariista. WBT
Aduunkii waa isbedelay, ma 1960 ayaa weli joogtaa..
Haddii arinka yahay Waqooyi iyo Koofur oo sax u aragto maxaa Majeerteen iyo Puntland laga rabaa oo loo eedayn, maa tiraadid Cali Khalif waa sax in Hargeysa joogo ee Puntland dhulka sheeganayaan amaan ha siiyeen…
Majeerteen baa hagraday iyo dalku waa Waqooyi iyo Koofur mid aan kuugu imaado. Kkkkkkk
Land of punt, maxaa tiri, ra’iisalwasaare Kheeyre waa daanyeer Wardhiigley mooska ka xaddi jirray! kkkkkk, walaahi thas is funny kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 🙂
Dadka Majeerteen anniga waxaan aaminsanahay inkastoo eey meelaha qaar nusqaan kayahiin, haddana waa qabiilka Somaliya uGu siyaasadda fiican, dadka hogaamiyana eey heeystaan dad qabiil ahaan u abaabulan, oo mideeysan. Tani ciyaar maahan.
Agoonta kacaanka ma fahmi karaan waxa u fiican, iyo waxa u roon. Ninkaan wardhiigleey mooska ka xaddi jirray ee Murusade, iyo mid ilkayar ah, ayaa waxeey soo xadaan “qudbaddo” eey dad horay u dhahaan, oo aanan maskaxdooda kasoo bixin. Waxuu kaloo sameeyn daanyeerkaan wardhiigleey mooska ka xadi jirray, in uu tuuto lagu jimicsaddo soo qaato, ayuu dadkaan daanyeerta ah ee caqliga xun ee Koonfurta Kaalgacyo ilaa iyo Xamar u dhaxeeya ku harowsaday. Midka isaga boss kiisa ah, ee Ilkayar, madaxweeyne Farmaajo, 10 jeer ayuu tuuto gashtay, agoonta kacaanka iyo guulwadayaashooda dhaheen madaxweeynaha waxuu dagay xeryaha ciidamada iyo wasaaradda gaashaandhiga, oo dagaal ayuu hogaamin. Waxaas oo dhan, waa been lagu qaldo dadka caqliga daanyeerka leh. Laakiin, daanyeertaan ma qaldi karraan Majeerteen, oo ah, dal facweeyn, oo Somaliya ku dhagan. Mardhowna dowladdda Puntland ee dalka Somaliya waa in eey xariirka u jartaa daanyeerkaan wardhiigleey mooska ka xaddi jirray. Walaahi, waa qosol hadalkaas land of punt.